Ramón Calderón oo ka hadlay sheekada ka socota Real Madrid & Sababta ka dambeysa bixitaanka Cristiano Ronaldo – Gool FM
Ramón Calderón oo ka hadlay sheekada ka socota Real Madrid & Sababta ka dambeysa bixitaanka Cristiano Ronaldo
(Real Madrid) 07 Luulyo 2018. Madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid Ramón Calderón ayaa shaaca ka qaaday sheekada ku qarsoon darbiyada garoonka Santiago Bernabéu ee la xiriirta In Cristiano Ronaldo uu ku biirayo Juventus.
Ramón Calderón ayaa wuxuu carabka ku adkeeyay xaalada ka dhex taagan garoonka Santiago Bernabéu uu sabab u yahay madaxweynaha haatan ee kooxda Real Madrid Florentino Perez iyo go’aamadiisa.
Calderón ayaa ugu horeyn yiri “Waxaan lasoo saxiixanay Cristiano Ronaldo sanadii 2009, wuxuu u muuqday mid doonay in uu heshiiska dhaco sababa la xiriira in uu xirto maaliyada kooxda Real Madrid wax walba ay ku qaadato”.
“Ronaldo wax badan ayuu kusoo kordhiyay kooxda mudada 9-ka uu ku sugnaa, wuxuu sanadkii dhalinayay 50 gool, in uu kooxda ka dhaqaaqo ma ahn wax fudud”.
“Florentino Perez wuxuu gaaray go’aamo badan oo taariikhi ah sanadihii lasoo dhaafay, laakiin dhibaatada heysata ayaa ah inuusan fahmin sida saxda ah ee lagu daaweyn karo xaaladahan oo kale, waxaana horey ugu soo aragnay Raul iyo Casillas”.
“Cristiano Ronaldo wuxuu arkay in Perez uusan ka heysan ixtiraamka uu ka mudnaa inuu ka helo, wuxuu doonayay inuu helo mushaar wanaagsan waana wax iska caadi ah, sababtoo ah waa shaqaalaha ugu wanaagsan ee shirkada, wuxuu ka careysnaa inuu qaato mushaar ka yar kan Neymar Jr”.
“Waxaan rajeynayaa in Florentino Perez uu ku qanciyo Ronaldo si uu ugu sii joogo garoonka Santiago Bernabéu”.
"Waan ka xumahay waayo Dumar badan oo qurxoon ayaa murug dareemaya haatan"!
Xulka qaranka Croatia oo u gudbay wareega afar dhamaadka koobka aduunka 2018 kadib markii uu rigoorayaal ku garaacay Russia